आणविक व्यंजन र अन्य पाक अनुप्रयोगहरू - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
सिद्धान्तहरू छोटो गाइड
मार्क Gaston द्वारा
यो पुस्तिका को सामग्री अधिकांश सजिलै उपलब्ध छ भन्ने जानकारी तथापि यो कहिलेकाहीं तपाईंले प्रयोग सर्तहरू परिचित हुनु हुनेछ नभएसम्म सधैं सजिलो पढाइ बनाउन गर्दैन तरिका लिखित छ।
तल, यस्तो sonotrode, आयाम आदि र पाकशाला आवेदन मा आफ्नो प्रभाव रूपमा sonication को महत्वपूर्ण सर्तहरू बताए छन्।
यो पुस्तिका तल कम वैज्ञानिक र थप पाक सम्बन्धित तरिकामा अल्ट्रासोनिक homogeniser प्रयोग व्याख्या गर्ने प्रयासहरू।
अल्ट्रासाउंड तरङ्ग र खाद्य आफ्नो आवेदन
एक प्रविधी रूपमा अल्ट्रासोनिक homogeniser विभिन्न प्रकारका धेरै वर्ष को लागि वरिपरि भएको छ, तर केवल बस सानो मात्रा पाक आवेदन मा आफ्नो बाटो फेला छ। को homogeniser धातु टिप या sonotrode को उच्च आवृत्ति कंपन मा बिजुली रूपान्तरण र नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ जो केही परिष्कृत इलेक्ट्रनिक्स समावेश गर्दछ।
को sonotrode मुख्यतया माथि र तल श्रव्य दायरा माथि एकदम उच्च आवृत्ति मा उत्प्रेरित गर्छ (जस्तै 26000 पटक संग दोस्रो वा 26Khz Uf200 ः टी)। को sonotrode अप उत्प्रेरित गर्छ र तल कि राशि आयाम भनिन्छ र सामान्यतया9र 240 μm बीच समायोजित गर्न सकिन्छ (औसत मानव बाल सन्दर्भ लागि वरिपरि 100 μm बाक्लो छ)। सरल सर्तहरू मा sonotrode माथि र तल तरल मा सार्दा एक पिस्टन जस्तै व्यवहार।
को sonotrode अप उत्प्रेरित गर्छ र एक तरल जोडतोडले गर्दा तल, यो sonotrode वरिपरि तरल भित्र उच्च र कम दबाब क्षेत्रमा सिर्जना रूपमा यो बारी मा cavitation रूपमा चिनिने घटना सिर्जना गर्छ। हामी एक उच्च तापमान मा फोडा गर्न कम तापमान मा फोडा (जस्तै एक कोठामा मुहर जस्तै) दबाव lowering कि गराउँछ तरल र (यस्तो प्रेशर कुकर रूपमा) दबाब हुर्काउन गराउँछ तरल भान्सा मा हेर्नुहोस्।
को sonotrode को टिप मा तेजी fluctuating दबाव pulsations तरल भित्र बुलबुले को गठन र त्यसपछि तीव्र पतन गराउन। यो सबै एक मिनेट मात्रा मा हुन्छ तर कारण velocities, तापमान र दबाब पनि उत्पन्न गर्न तरल भित्र विशाल सेना सिर्जना cavitation। यो लागि भान्सा मा हाम्रो लाभ गर्न बन्द गर्न सकिन्छ भनेर यी विशाल सेना छ स्वाद को निकासी द्वारा कक्षहरू rupturing वा particulates को टूटने।
यो उपकरण प्रयोग मा चुनौतीहरू एक तथापि दोहन र खाद्य पदार्थ बढाउँछ तरिकामा यो शक्ति नियन्त्रण गर्न छ र कम मनमोहक यौगिकों तिनीहरूलाई टुक्रयाउनु, तिनीहरूलाई नाश।
खरिद अल्ट्रासोनिक homogeniser मोडेल Uf200 ः टी अधिकतम शक्ति प्रयोगकर्ता उपलब्ध हुक्म र homogeniser नै आवेदन अनुरूप यसको प्रदर्शन समायोजन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि चर को एक नम्बर छ। यो पुस्तिका को प्रयोजन को लागि, प्रयोग मोडेल थियो 200 वाट एकाइ।
को को आकार सोनोट्रोड सज्जित एकाइ आफ्नो शक्ति पठाएमा कसरी एक प्रमुख प्रभाव छ।
धेरै सरल सर्तहरू मा, sonotrode को बडा सतह क्षेत्र यसलाई कुनै पनि दिइएको आयाम मा ड्राइव यो आवश्यक हुनेछ अधिक शक्ति। यस तरल पदार्थ को चिपचिपाहट पनि दिइएको आयाम मा sonotrode चलाउनु आवश्यक शक्ति मा एक ठूलो प्रभाव हुनेछ।
तर एक मोटी सस र संग पट भर्न पिस्टन अप यस्तो यो पनि व्यावहारिक गति मा त्यसो गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ पानी रूपमा पातलो तरल को एक पट मा धेरै छिटो सारियो र तल छ भने, एक पिस्टन वा plunger रूपमा sonotrode कल्पना, एउटै साँचो हुनेछ, यो कारण वृद्धि चिपचिपाहट गर्न तेजी अप र तरल मा तल पिस्टन सार्न धेरै शक्ति आवश्यक हुनेछ। पिस्टन वा plunger को आकार वृद्धि र यो पनि तरल मा यसलाई सार्न र तल थप प्रयास आवश्यक हुनेछ।
एउटै पनि sonotrode को साँचो हो। एक ठूलो sonotrode सज्जित संग, एकाइ तरल एक कम चिपचिपापन तरल भन्दा एक उच्च चिपचिपाहट छ भने oscillation को दिइएको आयाम उत्पादन टाढा कठिन काम हुनेछ।
को लागि विभिन्न आकार र आकारहरू संग Sonotrodes Uf200 ः टी
कुनै पनि शक्ति सेटिङ एक मा सानो sonotrode कारण यसको सतह क्षेत्र ठूलो दबाब उतार चढाव उत्पन्न हुनेछ र उच्च cavitation ठूलो sonotrode भन्दा टिप मा तीव्रतासँग (शक्ति सानो sonotrode सतहमा क्षेत्र केन्द्रित छ रूपमा)।
यो संभवतः कारण अधिभार गर्न एकाइ को बन्द परिणामस्वरूप, एउटै आयाम सम्म थप शक्ति त्यसो गर्न आवश्यक हुनेछ मा एक ठूलो sonotrode चलाउनु सम्भव नहुन सक्छ। यस मामला मा sonotrode को आकार कम गर्न छ वा एक उच्च शक्ति एकाइ प्राप्त गर्न।
इनपुट अल्ट्रासाउंड तीव्रता (कुनै पनि शक्ति सेटिङ मा) सतह क्षेत्र (ठूलो sonotrodes) वृद्धि, जहाँ घट्दै सतह क्षेत्र संग अल्ट्रासोनिक शक्ति तीव्रता बढ रूपमा, वा अर्को तरिका राख्न, सानो sonotrode अल्ट्रासोनिक शक्ति धेरै सानो क्षेत्र मा राख्दछ संग घट्छ, जहाँ एक ठूलो sonotrode ठूलो क्षेत्र शक्ति सर्छ रूपमा।
को homogeniser नमूना मा गरेको कुल काम प्रयोग गरिन्छ जब संयोजन छ शक्ति इनपुट को homogeniser को, को मात्रा नमूना र को समय यसलाई उजागर गरिएको छ। अर्डर reproducible परिणाम प्राप्त गर्न, हामी सबै तीन मापदण्डहरू विचार गर्नुपर्छ। एउटा सानो कप दुई मिनेट लागि तरल को पूर्ण मा उपकरण राख्न र त्यसपछि नै समय अवधिमा तरल को एक लीटर मा नै परिणाम प्राप्त आशा छैन! उत्तिकै सम्झना हो कि सानो नमूना आकार र उच्च शक्ति आदानों, को संग तापमान नमूनाको चाँडै उठ्नेछ। तापमान संवेदनशील नमूनाहरू लागि यो गर्मी dissipated गर्न रूपमा homogeniser द्वारा inputted ऊर्जा अनुमति अब अवधिमा कम शक्ति सेटिङ प्रयोग गर्न राम्रो छ।
नमूना तात्दै राम्रो तपाईं सिस्टम भाग्न कब्जा गर्न खोज्नुभएको धेरै aromas को केही कारण हुन सक्छ।
उच्च शक्ति आदानों पनि केही तेल प्रयोग गर्दा देख्न सकिन्छ रूपमा, नमूनाको क्षरण सक्छ। जब homogeniser को टिप मा उच्च ऊर्जा आदानों उजागर तेल जो केवल बिजुली बलिरहेको को स्वाद रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ अत्यधिक अप्रिय स्वाद परिणामस्वरूप बनाइदिन सक्छ!
नमूनाको तापमान संवेदनशील सामाग्री ठंडा लागि यस्तो बरफ स्नान वा नमूना केही सुक्खा बरफ को समावेश प्रयोग गरेर रूपमा परिणाम सुधार हुनेछ। लामो अवधिमा कम शक्ति आदानों को प्रयोग गरेर अल्ट्रासाउंड प्रत्येक फट बीच केही ठंडा अनुमति दिन्छ जो नाडी मोडमा एकाइ प्रयोग गर्छ प्रणाली भित्र जारी ऊर्जा फैलाने मद्दत गर्छ।
को homogeniser को इलेक्ट्रनिक्स भित्र, प्रयोगकर्ता नियन्त्रण दुई मुख्य मोड मा एकाइ सञ्चालन गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
यो मोडमा प्रयोगकर्ता sonotrode लागि आवश्यक अधिकतम आयाम को% छनोट। इलेक्ट्रनिक्स तब आयाम मा sonotrode ड्राइव प्रयास हुनेछ र sonotrode मा आवश्यक आयाम कायम गर्न उपकरण को इनपुट शक्ति समायोजन हुनेछ। को sonotrode सतह क्षेत्र एकाइ को उपलब्ध शक्ति यो आयाम मा संचालित गर्न धेरै ठूलो छ भने, आयाम सेट मूल्य पुग्न र छ भने एउटा अधिभार अवस्था पुग्यो बन्द हुन सक्छ।
इनपुट शक्ति नियन्त्रण
यो मोडमा प्रयोगकर्ता आवश्यक शक्ति इनपुट वाट सेट र इलेक्ट्रनिक्स प्रयोगकर्ता सेटिङ गर्न इनपुट शक्ति विनियमित गर्न मा oscillations को आयाम समायोजन हुनेछ। यो मोड तरल हस्तान्तरण शक्ति नियमन गर्न र यसैले तरल मा उत्पन्न गर्मी थप संवेदनशील नमूनाहरू गर्न क्षति परहेज सीमित गर्न अनुमति दिन्छ।
सञ्चालनको दुई मोड साथै त्यहाँ जसद्वारा इलेक्ट्रनिक्स र बन्द स्विच एक नाडी मोड, छ चक्र, जो को समय प्रयोगकर्ता द्वारा समय को 10% र 90% बन्द समय को 90% मा र 10% बन्द हुँदा सेट गरिएको छ। यो एक धड्कने प्रभाव दिन्छ र दुवै समग्र शक्ति इनपुट नमूना राम्रो आन्दोलन उच्च रहेको इलेक्ट्रनिक्स प्रत्येक कर्तव्य चक्र समयमा stabilizes रूपमा प्रारम्भिक आगत गर्न नमूना भित्र सीमित र बनाउनको लागि उपयोगी छ।
सामान्य संकेत र ट्रिक्स
राम्रो परिणाम पूर्व homogenised हुनुको गर्न ठोस आकार मा कम गरिएको छ जब प्राप्त गर्दै स्वाद को जलसेक लागि homogeniser प्रयोग गर्दा, यो उजागर सतह क्षेत्र वृद्धि हुनेछ सोनोट्रोड। लागि homogeniser प्रयोग गर्दा नै सिद्धान्त लागू हुन्छ कण आकार कमी। एक राम्रो परिष्करण उपकरणको रूपमा homogeniser को बारे मा सोच्नुहोस् एक कोर्स चिनारी छैन! कण आकारको कमीमा धेरै कामहरु द्वारा कणहरु को उच्च गति टक्करहरु द्वारा सोनोट्रोड मा उत्पन्न बक्सहरु लाई तीव्र गति दिएर गरिन्छ। धेरै राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरिनेछ भने केही कण कम्युनिकेशन sonication भन्दा कम गरियो। बल्क कण आकार को कमी संग शुरू भयो पहिले देखि नै यो हो कि एक ठूलो सतह को क्षेत्र को श्वसन को रूप मा उजागर भएको छ र सानो कणों तरल अधिक चाँडै मा त्वरित गरिनेछ, जिसके परिणामस्वरूप कणों को और अधिक तोड़ने के लिए बल के साथ उच्च टक्कर। Homogeniser द्वारा कम काम को आवश्यकता पनि हुनेछ, तापमान को बेहतर नियंत्रण को अनुमति को अनुमति दिइनेछ।
को homogeniser एकदम अनुवादित स्तरमा काम गर्दछ को ठूलो नमूनाहरू संग प्रयोगमा सय धेरै milliliters वा बढी नमूनाको पूरा sonication सुनिश्चित, को sonotrode वरिपरि मात्रा ताजा छ भन्ने सुनिश्चित गर्न थप आन्दोलन प्रदान गर्न भन्न जब यो उपयोगी छ। यो थप विशेष साँचो हो viscous नमूनाहरू। राम्रो चुम्बकीय दोषी यो प्राप्त गर्न उपयोगी तरिका हो। यो आन्दोलन पनि वरिपरि sonotrode overheated छैन तरल को मात्रा सुनिश्चित संग मद्दत गर्छ। एक बरफ स्नान, वा नमूना सुख्खा बरफ टुक्रा प्रयोग गरेर sonification द्वारा प्रदान ऊर्जा हटाउन मद्दत गर्नेछ। सामाग्री संवेदनशील तापमान छ भने पहिले नै छलफल रूपमा, र समय को एक वृद्धि अवधिमा कम शक्ति सेटिङ प्रयोग वा नमूना ध्वनि दलहन बीच शांत गर्न अनुमति नमूनामा उत्पन्न तापमान सीमित गर्न नाडी मोड प्रयोग गर्नुहोस्।
मिशेलिन स्टार-सम्मानित रेस्टुरेन्ट विला Mittermeier देखि ईसाई Mittermeier Uf200 ः टी अल्ट्रासोनिक emulsification समयमा